एमाले–माओवादी एकता बैठक भइरहेको मानभवनस्थित घरका मालिक अधिकारी को हुन् - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
एमाले–माओवादी एकता बैठक भइरहेको मानभवनस्थित घरका मालिक अधिकारी को हुन्
२०७४ फागुन २ बुधवार
काठमाडाै, २ फागुन । माओवादीसँग पार्टी एकताबारे निर्णय गर्न एमालेले आज, २ फागुन अपराह्न स्थायी कमिटीको आकस्मिक वैठक डाक्यो । स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको स्थान भने पार्टी मुख्यालय धुम्बाराही नभएर मानभवनस्थित एक निजी महल थियो ।
पार्टी एकताबारे केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच यही घरमा छलफलका शृंखला चलिरहेका छन् । १ र २ फागुनमा पनि दुई शीर्षस्थबीच यही घरमा छलफल भए । आजै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक पनि यहीँ बस्ने तयारी छ ।
दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता गराउने असाध्यै महत्वपूर्ण वैठक पार्टी कार्यालयमा नभएर निजी घरमा भइरहेको छ, आखिर त्यो घर कसको हो त ?
नुवाकोट चोकते मुलघर भएका निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको घर हो यो ।
यसअघि, माओवादी एकता प्रकृयाको वैठकसमेत अधिकारीको यही घरमा बस्ने गरेको थियो । दाहाल पुत्र स्वर्गीय प्रकाशले वीना मगरलाई मानभवनस्थित यही घरमै भित्र्याएको स्रोत बताउँछ ।
शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रोप्राइटर रहेका अधिकारी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका असाध्यै नजिकका मानिन्छन् । अधिकारीकै नाममा रहेको ललितपुरको खुमलटारस्थित भव्य बंगलामा दाहाल गत पुस पहिलो साता डेरा सरेका थिए ।
अधिकारीले दाहालको आर्थिक कारोबार मात्र नभै घरायसी व्यवहारमा समेत सहयोग गर्ने गरेको अधिकारीनिकट स्रोत बताउँछ ।
निर्माण व्यवसाय शुरु गर्नुअघि काठमाडौंको भोटाहिटीमा कम्प्युटर इन्स्टिच्युट खोलेका अधिकारीको माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएसँगै व्यवसायिक विस्तार भएको हो ।
२०५० को दशकको शुरुवातमा अधिकारीले भोटाहिटीको साझा भवनको तेस्रो तल्लामा नेपाल कम्प्युटर सेन्टर चलाएका थिए ।
नुवाकोटको वागेश्वर–३, चोकते घर भएका सामान्य आर्थिक हैसियतका अधिकारीले पछिल्लो डेढ दशकयता उच्च आर्थिक हैसियत बनाएका हुन् ।
उनका ससुरा सिन्धुलीका कमल देवकोटा र साली निर्मला देबकोटा दुबैले माओवादी युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए ।
टिपर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
महिला पत्रकारले लगाइन् मन्त्री केशव स्थापित माथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप
प्रेस युनियन डाेटीका अध्यक्ष बेपत्ता !
कपिलवस्तुमा दुर्गा भवानीको मूर्ति सेलाउने क्रममा हिन्दु र मुस्लिम बीच झडप भएपछि कृष्णनगरमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु
२०७५ कात्तिक ५ सोमवार
पैसाको लागि पुरै नांगिने यी नायिकाहरु !
एकअर्काले श्रीमती साटेर यौनसम्बन्ध राखेपछि...
बलिउडकै सबै भन्दा बोल्ड सिन भएको चलचित्रको ट्रेलरमा पूनम पाण्डेको अश्लिल हर्कत ! (भिडियो सहित)
नौ जना नेपाली भाषी भुटानमा सांसद बने !
२०७५ कात्तिक ३ शनिवार
निर्मला पन्त प्रकरणमा मुछिएका एसपी र इन्सपेक्टरलाई बर्खास्त गर्दै सरकार
२०७५ कात्तिक ४ आइतवार
राति सेक्स गर्दा चिन्तित हुनु हुन्छ ? अब यसरी सेक्स गर्नुस्
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानमाथि बलात्कार आरोप !
प्रधानमन्त्री ओलीले कोजाग्रत पूर्णिमासम्मै टीका लगाइदिने
खुकुरी प्रहार गरी युवकको हत्या
आर.बी. खत्री (अर्जुन)
हरेराम तिमिल्सिना (विजय)
सुदर्शन के सि
Copyright © 2018 Shikhar Media Network PVT LTD. All Rights Reserved.